WOWOW 8 Inch Centerset Bridge Bridge Faucet volamena ao an-dakozia miaraka amin'ny Sprayer amin'ny sisiny
Home / Fitaovana an-dakozia / Faucet an-dakozia an-dakozia / WOWOW 8 Inch Centerset Bridge Taratasy volamena an-dakozia varahina miaraka amina sisin-tsifotra
Faucet ao an-dakozia roa - Ny faucet an-dakozia an-dakozia dia misy endrika 2-tantanana ary misy hosotra famatsiana (hatsiaka sy mafana), izay afaka manampy amin'ny fifehezana tsara ny habetsahan'ny rano sy ny mari-pana. Fantsona mihodina 360 ° mihodina be dia tsara koa ho an'ny milentika indroa.
Fananganana varahina mafy - Ny faucet tetezana mavesatra dia vita amin'ny varahina mafy ary milanja 7.76 Ibs. Ny fantsom-baravarankely vita amin'ny lakozia miaraka amina famaranana volamena dia ny harafesina, ny harafesina, mahatohitra ny rano ary manome antoka ny fiarovana ny rano sy ny androm-piainana lava.
Mpamafa amin'ny sisin'ny varahina misy fantsona misintona - Miaraka amin'ny tsindry bokotra iray, ny sprayer amin'ny lafiny varahina avo lenta dia afaka manondraka rano mikoriana mafy hanadiovana lovia sy loto ao an-joro. Ny hosotra tafiditra dia azo esorina hatramin'ny 59 santimetatra, izay mora diovina amin'ny toerana rehetra manodidina ny fantsakana.
Serivisy ho an'ny mpanjifa - Ny tetezana 8 santimetatra nopetahana faucet an-dakozia volamena dia manana fiverenana voafetra 90 andro sy fiantohana 5 taona. Raha misy ny fanontaniana momba ny faucet tetezana varahina, azafady aza misalasala mifanerasera aminay, dia faly izahay manolotra vahaolana.
Ampahany : 23115A1G Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucet an-dakozia an-dakozia Tags: Bridge, Volavola volamena
17.44 x 13.31 x 2.87 santimetatra